7 waxyaabood oo Galaxy s7 sameeyo iyo iPhone ma sameeyo | Wararka IPhone
7 waxyaalood oo Galaxy s7 sameeyo oo aanu iPhone samayn
Qolka Ignatius | | Tartanka, iPhone
Axadii la soo dhaafey shirweynihii aduunka ee mobilka, Samsung waxay si rasmi ah ugu soo bandhigtey Galaxy S7 cusub iyo Galaxy S7 Edge, calamada cusub ee shirkada fadhigeedu yahay Kuuriya. In kastoo jaleecada hore aynaan helin isbeddelo badan, haddii aan diiradda saarno gudaha, haa waxaan heli karnaa hawlo dhowr ahDhinaca hal sheeko, dhinaca kale wax aan caadi ahayn, taas oo nagu qasbeysa inaan sameyno isbarbardhig, mararka qaarkood nacayb leh, iPhone 6s / 6s Plus.
1 Lacag deg deg ah
2 Kordhinta kuleylka
3 Xaqiiqda Wicitaanka
4 Resistente al agua
5 Kaydinta la ballaarin karo
6 Had iyo jeer-soo bandhig
7 SIM iskujir ah
Batariga Galaxy S7 wuxuu bixiyaa kaladuwana 3.000 mAh halka iPhone 6s Plus uu yahay 2.750 mAh. Waad ku mahadsan tahay amarka degdegga ah ee S7, waa suurtagal in bateriga laga xareeyo 100% awoodiisa wax ka yar saacad iyo badh, iyada oo lagu xisaabtamayo awooddeeda weyn ayaa ah qodob ku habboon. Dhinaceeda, iPhone 6 Plus badanaa waxay qaadataa in ka badan laba saacadood si ay u sameyso lacag buuxda, iyada oo ay tahay baytari awood hooseeya.
Suurtagalnimada inaan ku soo dallaci karno Galaxy S7 indho-indheyn, waxay noo oggolaaneysaa inaanan miiska ka buuxin fiilooyin iyo inaan kaliya dhigno aaladda kor ku xusan salka si aad u bilowdo lacag-bixinta. Marka laga hadlayo xawaaraha rarka qaabkan, hawshu waxay qaadan kartaa 10 iyo 15 daqiiqo in ka badan haddii aan ku shubno hab dhaqameed.
Waqtigan xaadirka ah qalabka kaliya ee Apple ee na siiya suurtagalnimadaan waa Apple Watch. Malaha Apple waa inay hirgelisaa habkan cusub ee qalabka lagu dalaco ka dib waxqabadkii wanaagsanaa ee ku soo oogista degdegga ah ee Apple Watch ay bixisay illaa iyo hadda.
Xilligan, labada Galaxy Note 5 iyo Galaxy S7 labadaba u oggolow in loo isticmaalo aaladda dhabta ah ee aaladda iyaga oo adeegsanaya iyaga oo isku dhafan Samsung Gear VR. Muraayadaha sida Samsung ay u siisay dhammaan dadkii ka soo qeybgalay soo bandhigida calanka cusub ee shirkadda Kuuriya Axaddii la soo dhaafay.
In kasta oo tiro badan oo qalab ah oo aan ka heli karno si gaar ah loogu talagalay iPhone-kaNasiib darrose, ma aannu helin wax noo oggolaanaya in aannu iPhone ka dhigno aaladda dhabta ah ee dalwaddii.
Waxaa jiray warar xan ah oo dhowr ah oo ku wareegayay hareeraha moodeelka soo socda ee iPhone-ka, kaas oo lagu sheegay in IPhone 7 uu noqon lahaa mid aan biyuhu xirin. Iska caabbinta biyuhu uma muuqato inay qayb ka tahay qorshayaasha Apple ee ku saabsan iPhone-ka, laakiin way nala yaabi kartaa. Kuuriya ayaa intaa ku daray shahaadada IP68 ee Galaxy S7 cusub ee u oggolaaneysa inay u adkeysato biyaha iyo boodhka, taas oo noo ogolaaneysa inaan quusinno aaladda illaa 1,5 mitir oo qoto dheer oo aan ku sii jirno biyaha iyada oo aan la xadidin waqtiga.
Kaydinta la ballaarin karo
Samsung ayaa mar kale soo bandhigtay ikhtiyaarka ah in la ballaariyo keydinta gudaha ee aaladda inkasta oo waliba ay ku jirto iska caabbinta boodhka iyo biyaha. Sidan oo kale, kaliya moodeel ayaa la dhigayaa suuqa si dadka isticmaala ee daneynaya ay u awoodaan ballaariyo awooddeeda iyadoo la adeegsanayo kaararka micro-SD illaa 232 GB.
Had iyo jeer-soo bandhig
Taleefanka iPhone-ka, haddii aanaan haysan smartwatch, mar kasta oo aan dooneyno inaan aragno waqtiga ama haddii aan helno ogeysiin, waa inaan shidnaa shaashadda, iyadoo la adeegsanaayo isticmaalka batteriga ee tani ay muujineyso, maadaama aanan sameyn hal mar maalintii, laakiin marar badan. Samsung ayaa xalliyay batterigan lumay adoo ku daraya shaqada Had iyo jeer-ka ah ee bandhigyada OLED u oggolaadaan kaas oo isku daraya qalabka. Shaqadani si otomaatig ah ayey u hawlgashaa markaan taleefanka ku ridanno jeebkeena ama markaan shaashadda ku daboolno dabool. waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican suuqa, sida laga soo xigtay DisplayMate.
SIM iskujir ah
Galaxy-ka cusubi wuxuu na siinayaa booska si aan u gelino kaarka isku dhafan ee SIM, taas oo ku darsanaysa awoodaha labada SIM waddamadaas oo ay ku badan yihiin adeegsiga laba hawlwade oo kala duwan. Suuqa waxaan ka heli karnaa taleefano badan oo nuucaan ah laakiin waqtigan xaadirka ah midka kaliya ee sharad ku gala labada sim ee sare leh waa Samsung.
Kuuriya ayaa tuurtay laba nooc oo ah nooca 'Note 5' oo u gaar ah Hindiya. Laakiin Galaxy S7 mar dambe lagama maarmaan noqon mayso in la soo saaro nooc gaar ah suuqyada qaarkood sida Shiinaha ama Hindiya. Dhinaceeda, iyo sida aan wada ogsoonahay, Apple waligeed ma bixin wax taageero ah in lagu daro in kabadan hal kaar oo SIM ah qalabka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » 7 waxyaalood oo Galaxy s7 sameeyo oo aanu iPhone samayn
Maqaal aad u wanaagsan, kuwa naga mid ah ee jecel labada madal, waa ku habboon tahay in la ogaado dhammaan faahfaahintaan
Wtf?! markii ugu horeysay ee Samsung sifiican looga hadlo taariikhda iPhone-ka maanta. : AMA
Hal shay oo dheeri ah, lacag bixinta mobilka ee Isbaanishka ayaa horeyba u shaqeyn jirtay sanado. Apple Pay, in kasta oo lagu dhawaaqay sannadkan, haddana waxaan ka shakisanahay inay imanayso.
Ignacio Sala, mid ka mid ah kuwa yaqaana sida loo arko wanaagga tartanka ... iyo ku celcelinta waxay u fiicantahay Apple inuu la qabsado, aniga ahaan inaan u caabudo astaan ​​kaliya inaan noqdo astaan ​​iguma haboona.
maalmahan OS kasta waa ku weyn yahay maalinba maalinta ka dambeysa faa'iidooyinkiisa iyo waxyeellooyinkiisa…. laakiin qalabka ayaa wax badan ka sheegaya.
Apple waligeed ma bixin doonto lacag soo saaris sababtoo ah taasi xitaa ma ahan fiilo la'aan saacadana waa inaad ka tagtaa habeenkii waa u qalantaa burushka cadayga sidoo kale maaha mid loogu talagalay taleefanka gacanta. Apple waxay bixin doontaa lacag bixinta dhabta ah ee wireless kuleylka 5 mitir waxaana durba jira warar xan ah oo sheegaya in shirkada tamarta bixisa ay siin doonto lacagta dhabta ah ee wireless wireless. Haddii uusan ku jirin iphone7 wuxuu ahaan doonaa 7s.
Waan ka xumahay laakiin maqaalkani waa wanaagsan yahay laakiin waa wax aan jirin oo dhab ah in la isbarbardhigo S7 iyo 6s ... Ugu yaraan sug inta 7 ka soo baxayaan, sax? Waxay u egtahay isbarbardhiga PlayStation 4 iyo Xbox 360 ...
Jawaab Eduardo Veloz
Haddii aad u maleyneyso inay nacasnimo tahay in la isbarbardhigo S7 iyo 6s maxaa yeelay way ka horreeysaa taleefanka Apple, isla macno darradaas ayaa noqon doonta in lala barbardhigo iPhone 7, maxaa yeelay waxaa la sii deyn doonaa 6 bilood ka dib Samsung.
Ku jawaab Lopower
Waxaan u maleynayaa inay gabi ahaanba xalaal kuu tahay inaad muujiso fikirkaaga, laakiin halkaa inaad cayda ka gaarto waddo dheer, waxaan u maleynayaa inaad muujineyso inaad leedahay aqoon aad u sareysa ilaa calaamadaha faallooyinkaaga.
Waxaa jira hal shay oo Apple sifiican usameyso Samsung waligeed isbarbar dhigi meyso, waana iib. Iyagu ha jiifo bil.
Anigu dan kama lihi, moobilkeygu kama yimaado shirkadahaas midkoodna ima quudiyaan laakiin ... Waad ogtahay in Samsung ay iibiso taleefannada casriga ah oo ka badan Apple, sax?
Haddii Samsung ay wax badan iibiso ... Laakiin Apple wax badan ayey kasbataa: tani waa waxa ay ugu yeeraan PROFITABILITY. Miyaad doorbideysaa inaad iibiso 1000 oo aad kasbato € 100 ama dadaal yar oo aad iibiso 100 oo aad kasbato € 1000?
Ma lihid waxbarasho.
Iibi haddii Apple uu hoos u dhaco 25% sababtoo ah iPhone. Intaa waxaa dheer, processor-ku wuxuu samsung ku sameeyaa a9 iyadoo intaas oo dhan la yiri, sax? Iyo sidoo kale sanadka 2017 waxaan isticmaali lahaa shaashadaha gaaska leh ee ay soo saarto Samsung
Ku jawaab Luciano
Anigu ma ihi taageere Samsung waxaanan doonayaa inaan iibsado iPhone 7. Laakiin ugu dambayntii waxay u muuqataa in baytariyada la saaray sababta oo ah kuwii hore wax badan ayaa loo doonayaa iyada oo kaliya shaashadaha HD oo xallin hooseeya. Xusuusta wananka ugu yar iyo processor-ka leh 2 koronto oo keliya ayaa ugu dambeyn dhageystay dadka iyadoo iphone 7 halkaasna ay wax walba kula qaadayso
Gacaliye Luciano ... IPhone-ka "kaliya" wuxuu leeyahay 2 koronto, laakiin waa processor-ka ugu awoodda badan suuqa, hubaal xitaa in ka badan 820-ka hadda la sii daayay, ayaa weli la arki doonaa.
Shaashadda waxay u egtahay mid fiican, maxaad u rabtaa 2k?
Waxa uu processor-ku ku sameeyo Samsung ... processor-ka waxaa naqshadeeyay Apple iyo Samsung ayaa ku dhisa warshadeeda iyagoo raacaya tilmaamaha Apple, laakiin guji ama gooyn midna.
Waa run inay leedahay waxyaabo xiiso leh, laakiin markaa haddii aad ka fikirto wax badan ma ahan ... Amarka degdega ah wuxuu badbaadiyaa nus saac oo lacag bixin ah, in kasta oo batteriga iPhone-ka uu ka yar yahay, haddana muddada ayaa ka dheer, sidaa darteed maahan horusocod cajiib ah ... Kordhinta ku-shubista ma aha faa'iido weyn, haddii aadan rabin fiilooyinka waxaad iibsaneysaa saldhig caadi ah, sida iPhone-ka uu leeyahay, iyo voila ... Xaqiiqda dhabta ah waa toy (hadda) oo aan lahayn adeegsi dhab ah , Kaarka SD, ee ku jira Android, waa wax aan micno lahayn oo ku saabsan arrinta rukhsadaha (Waxaan haystaa z3 waana necbahay), labalaabku waa wax aan badidoodu u baahnayn, iyo iska caabbinta biyuhu waa mid dheeri ah oo loo baahan yahay, haddii kaliya ilaalinta mobilada (maxaa ku habboon)… Shaashaduna marwalba way daaran tahay iyada oo wax kale laga yareeyo (ugu yaraan kuwa aan xirno saacadaha caadiga ah).
Isku soo wada duuboo, moobilku iima muuqdo inuu haysto wax sidaa u khaas ah oo ku saabsan dhamaadka-sare (iphone iyo Android) dagaalkuna wuxuu la mid noqonayaa had iyo jeer: nolosha batteriga iyo khibrada isticmaale ...
Ku jawaab Zymmer
Hagaag, haa, runtu waxay tahay inay jiraan 7 waxyaalood oo s7 sameeyo oo aan ahayn iphone ... Midda kale waxay tahay inay leeyihiin nooc xiriir ah. Oh, oo waxaan la yaabanahay in baloog ku saabsan Apple isbarbardhigga wali lagu sameeyo 3000 mAh vs 2750 mAh, taas oo laga filan karo baloog ku saabsan Android, waxaan horeyba u tixgelinnay inaysan macquul ahayn in la isku dayo sababo iyaga ku saabsan, laakiin halkan ... Maxaan doorbidnaa, batari 5000 Mah ah oo soconaya 2 saacadood ama 1000 mAh batari ah oo soconaya 2 maalmood? Ma aqaano hadii s7 ama iphone 6s uu sii dheeraanayo, diiwaanka, laakiin waxaan rabaa inaan dhaho awooda batteriga waa mid aan quseyn, noo sheeg mudada ninka!.
Ku jawaab Micael
Apple 3D taabashada: tagtay, hada iyo mustaqbalka
Foxconn waxay ku iibsatay Sharp $ 6.200 bilyan